Al-Shabaab badan oo la dilay iyo gaadiid laga gubay. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Maanta ayaa mar kake waxaa dagaal culus uu deegaano ka tirsan gobolka Mudug ku dhex maray Al-Shabaab iyo dad ka shacabka ah ee deegaanadaasi.
Dagaalka waxaa uu yimid kadib markii ay shacabka u adkeysan waayeen dhibaatooyin isa soo taraya ee ay kala kulmaan Shabaab uguna danbeysay markii lagu amray in ay Iska soo saaraan caruur badan oo dagaalka shabaab kala qeyb qaata.
Maanta waxaa lagu dagaalamay deegaano hoos taga degmada Xarardheere ee Mudug oo ay kamid yihiin Ceel Cabdi , Caad iyo meelo kale.
Shabaab oo shalay qabsaday deegaano kamid ah kuwa lagu dagaalamay ayaa gelinkii danbe ee maanta dagaal culus looga saaray.
Dadka shacabka ee la dagaalamyayy Shabaab ayaa gelinkii danbe ee maanta dib u qaaday dagaal aad culuslaa , waxaana saacado badan oo dagaalka uu socday la sheegayaa in ku dhawaad 20-dagaalame laga dilay shabaab islamarkaana gaadiid laga gubay.
Dadka deegaanka ayaa dhankooda la soo warinayaa in ay jiraan dhaawacyo gaaray mase ay sheegin dad dagaalka uga dhintay.
Waxaa caawa maqribadi si buuxda shabaab loogala wareegay meelihi ay shalay qabsadeen ee deegaanka Caad iyo kuwa u dhaw iyadoona lagu soo waramayo in lagu celiyay Saldhigyadii ay hore ugu sugnaayeen , waa shabaabka e.
Dhaawacyada dadka shacabka ah ee dagaalka ku dhaawacmay ayaa qaar la gaarsiiyay magaalada Gaalkacyo ee Xarubta Gobolka Mudug , sidoo kale Shabaab ayaa go’doomiyay isu socodka deegaanada dhaca koobfurta Mudug.
Gudoomiyaha degmada Hodan oo xilka laga qaaday , loona…